Baro wax walba oo ku saabsan qulqulka diyaaradda | Saadaasha Shabakadda
Wareegga dabaysha ee adduunka ayaa badan durdurrada u kala qaada qabow iyo kuleylka una qaybiya dhammaan geesaha meeraha. Mawjado badan ayaa lagu quudiyaa kala duwanaanshaha isbeddelka cadaadiska, kuwa kale cufnaanta hawada, qaar ka yimaada kor u kaca uumiga biyaha badda, iwm.
Maanta waxaan u nimid inaan ka hadalno kuwa caanka ah qulqulka diyaaradda Kuwani waa qulqulka hawada oo ku wareegaya xawaare sare iyo meeraha agagaarkiisa, galbeed ilaa bari, iyagoo ka faa'iideysanaya joojinta ka dhexeysa unugyada gudbinta. Marabtaa inaad ogaato sida qulqulka diyaaraddu u shaqeyso iyo saameynta ay durdurka diyaaraddu ku leedahay cimilada?
1 Jet durdurrada
2 Goorma ayaa xilligan la ogaaday?
3 Astaamaha Jet Stream
4 Guutooyin iyo gadaal
5 Azores anticyclone
6 Jet stream iyo kuleylka adduunka
Waxaa badanaa loo yaqaan 'durdur diyaaradeed oo keligiis ah, laakiin waxaa jira afar durdurrood oo waaweyn oo wareegaya meeraha, laba meelood oo kasta.
Marka hore waxaan haynaa qulqulka jet polar, oo laga helo 60 ° loolka, labada woqooyi iyo koonfurta labadaba, wuxuuna mas'uul ka yahay dhaqdhaqaaqa guud ee jawiga bartamaha latitude.
Waxaan sidoo kale leenahay qulqulka hawada sare ee hawada oo wareegaya 30 ° isla markaana aan muhiimad gaar ah u lahayn saadaasha hawada ee aagga. Sababtoo ah tani saameyn yar ayey ku leedahay cimilada, qulqulka qulqulka qulqulka ayaa ka magac yar oo kaliya loo tixgeliyaa inuu yahay mid muhiim ah oo qaboojin ah.
Daadadkani waxay ku dhow yihiin inay gaadhaan xadka dhulka loo yaqaan 'troposphere', oo qiyaastii 10 kiiloomitir u jira dheerarka dhexe, halkaas oo ay ku xawaare aan caadi ahayn oo ku saabsan 250 km / saacaddii, xitaa helitaanka dabaylo gaaraya ilaa 350 km / saacaddii. Si loo badbaadiyo shidaalka loona yareeyo waqtiga safarka, dayuurado badan oo ganacsi ayaa ku duulaya xilliyadaan si ay uga faa'iideystaan ​​xoojinta xawaaraha dabaysha.
Diyaaraduhu waxay leeyihiin ballac caadi ah oo qiyaastii ah 200 kiiloomitir iyo dhumucdiis oo wareegeysa inta u dhexeysa 5.000 iyo 7.000 mitir, in kasta oo dabeylaha ugu badan ay gaarayaan oo keliya qaybtooda dhexe, taas oo loo yaqaan xudunta diyaaradda. Diyaaradda saameysa Jasiiradda Iberia ayaa ah tan ugu weyn.
Goorma ayaa xilligan la ogaaday?
Hawada hawadan waxay bilaabeen in la barto intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka daraasadihii ugu horreeyayna waxaa la soo saaray dhammaadka, tan iyo intii dagaalka socday, daraasaddan waxay ahayd sir ciidan. Jabbaanku waa kuwii ugu horreeyay ee ogaada in hawo aad u weyn ay dhex mushaaxeyso waqooyiga iyo koonfurta cimilada oo leh xawaare aan caadi aheyn kana faa’iideysatay inay bambooyin buufin ku ridaan Mareykanka.
Markii ugu horreysay, Mareykanku kama baqin in Japan ay qorsheyn karto weerar xagga cirka ah oo laga helayo meel qiyaastii 7.000 km u jirta midba midka kale oo ay ku kala go'do badweynta. Fogaantaas diyaaradihii jiray waxay ku dhawaatay inaan la helin. Si kastaba ha noqotee, helitaanka qulqulka diyaaradda ayaa u oggolaatay Jabbaanku inay duulimaadyo sahamin ah ku maraan xeebta galbeed ee Mareykanka, waxayna sidoo kale diyaariyeen qaab xeeladeysan oo weerar ah. Laga soo bilaabo Japan waxay ka sii daayeen buufinno waraaqo waaweyn ah oo ay ka laalaadeen walxaha qarxa oo fara badan. Markii buufinnada ay u suurtagashay inay gaaraan diyaaradda, waxay ka gudbeen badda Baasifigga xilligii ugu sarreysay iyadoo la kaashanayo saacad ayay culeyska ku rideen bartilmaameedkoodii. Waxay ku guuleysteen inay qarxiyaan in ka badan 1000 waxyaabaha qarxa oo dab ka kiciya dhamaan galbeedka Mareykanka.
Astaamaha Jet Stream
Diyaaradda cirifka ayaa si toos ah uga sameysan aagagga ay cufnaanta hawo diimeed ee ka timaaddo Equator ay ku kulmaan xilliyada qabow ee ka imanaya Cirifka Waqooyi. Duufaannadaasi waxay ku xeeran yihiin Dhulka oo oscillate, iyagoo sameeya mowjado u eg kuwa hareeraha webiga.
Waxay kuxirantahay waqtiga sanadka aan joogno, jetku had iyo jeer ma aha isla loolkaTaabadalkeed, wareejin xilliyeed ayaa dhacda. Xilliga xagaaga iyo bilaha guga waxay ku taalaa qiyaastii 50 ° oo waqooyiga loolka jiilaalkana waa ilaa 35-40 ° N lat.Xilliga jiilaalka awooda diyaaradu way ka weyntahay xagaaga waxayna gaaraan xawaare aad u daran. Inta lagu jiro bilaha xagaaga cufnaanta hawada diiran ee kuleylaha ayaa ka awood badan, iyadoo riixeysa qulqulka diyaaradda ee waqooyiga. Dhanka kale, xilliga jiilaalka, cufnaanta hawo-mareenka ayaa xoog badan, sidaa darteed waxay awood u leeyihiin inay ku sii ballaariyaan latitude hoose.
Jetka Polar-ku wuxuu u dhigmaa dusha sare Jabhadda Polar iyo qeybinteeda, loo yaqaan Mawjadaha Rossby, waxay dhalisaa cadaadis sare dhanka midig ee durdurka iyo cadaadis hoose oo dhanka bidix ah, oo dusha sare ka muuqda sida anticyclones (anticyclones subtropical, sida antiyclone ee Azores, taas oo saameyn weyn ku leh Jasiiradda Iberian) iyo duufaannada (duufaannada Atlantic ee Jabhadda Polar), siday u kala horreeyaan.
Sidaa darteed, wadada hadda socota ayaa go'aamisa wadada duufaanka Atlantic ee la xidhiidha Polar Front. Jidka socodka qulqulka diyaaradda wuxuu kuxiran yahay gebi ahaanba xawaareheeda. Marka xawaaruhu ka sarreeyo, qulqulka hawadu wuxuu raacaa waddo laga bilaabo galbeed ilaa bari oo si tartiib ah ayuu u wareegaa Markay wareegga noocan ahi dhacayo ayaa la yidhaa aag ama isbarbar socda.
Dhinaca kale, marka xawaaraha hadda socda uu yaraado, hirarka waa la xoojiyaa oo waxaa loo sameeyaa togagyo dhaadheer oo dhanka koonfureed ah iyo jihooyin xagga woqooyi ah, kuwaas oo ka soo bilowda aagagga leh cadaadis hooseeya oo sarreeya dusha sare Markay wareegga noocan ahi dhacayo, ayaa la yidhaa azonal ama meridiyan.
Guutooyin iyo gadaal
Weelasha ay sameystaan ​​wareegga tartiib-tartiibka ee qulqulka qulqulka qulqulaya waa soo gelida hawo qabow xagga koonfureed ee wadada aaga hadda. Weelashaasi waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqa duufaanka sidaa darteed waxay uga muuqdaan dusha sare sida duufaanno.
Lambaradu waa cakis. Waxay u oggolaadaan hawada hawada kulaylaha waqooyiga, dabiiciga ah, oo wuxuu reebaa raadadka heerkulka sare iyo cimilada wanaagsan. Markay meelihii weelka iyo rido la isku daro oo la beddelo ayay bixiyaan kala duwanaansho weyn waqtiga gogosha dhexe.
Mararka qaarkood cufadan hawada ka soo barakicisay lataliyayaashoodii caadiga ahaa way ka go'i karaan diyaaradda weyn, iyadoo laga go'doomiyey. Haddii cufnaanta hawadaas ka go'day inta kale ee diyaaradda ay ka timaaddo weel, waxaa loogu yeeraa diiqad go'doon ah oo heerarka sare ah ama si wada jir ah loogu yaqaanno dhibic qabow.
Sidaan kor kusoo sheegnay, Azores anticyclone waxay saameyn weyn ku leedahay cimiladayada jasiiradda Iberian. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa dhaca sanadka oo dhan iyada.
Waxay asal ahaan ka soo jeedaan aagagga ku-meel-gaarka ah ee dhulgariirka. Maaddaama ay weyn tahay go'doonku waxaa jira aag isku-dhaf ah oo isku-dhafan oo lagu garto jiritaanka duufaanno. Agagaarka aaggan waxaa ku yaal aag ballaadhan oo xinjirowga lidka ku ah oo soo saara, tusaale ahaan, lama degaanka Saxaraha.
Mid ka mid ah dawooyinka lidka ku ah dawooyinka lidka ku ah waa tan Azores. Markay xagaagu timaaddo oo inta shucaaca qorraxda dhacdaa ka weynaato, dawada xinjirowga lidka ku ah ayaa barara. Antyclone waxay u shaqaysaa sidii gaashaan iyo uma oggolaaneyso in horudhacyada ay gaaraan Spain inteeda badan, sidaa darteed, roob ma di'i doono. Meesha kaliya ee aan aad loo ilaalin waa waqooyiga, sidaa darteed jihooyinka dhex mara bartamaha Yurub waa lagu soo dhex dhuuman karaa. Sababtaas awgeed, xagaaga ayaa diwaangaliya roobab aad uyar iyo maalmo badan oo qorax leh, kaliya woqooyiga ayaan ka heli karnaa roobab badan.
Xilliga jiilaalka, anticyclone-kan wuu sii yaraadaa oo wuxuu dib ugu noqdaa dhanka koonfureed. Xaaladani waxay u oggolaan doontaa soo gelitaanka aagagga horudhaca Atlantic oo kaliya wax ka imanaya koonfurta iyo jasiiradaha Canary ayaa la ilaalin doonaa. Sidoo kale wuu bixi doonaa marinka bilaashka ah ee laga soo galo albaabbada dabaylaha qabow ee woqooyiga.
Hadday ilo ama autumns qaar yihiin kuwo rooban ama ka yar waxay kuxirantahay oscillations-ka Azores anticyclone, oo aan inta badan si habsami leh u socon, laakiin kor iyo hoos ugu soo boodaya. Markay doontu rogmato, waxay u oggolaanaysaa jihooyinka inay soo galaan Jasiiradda Iberia, markay soo jeesatana, waxay ka horjoogsataa inay hor-u-dhowaadaan jasiiraddeenna, iyagoo ina siinaya maalmo qorax iyo cimilo wanaagsan.
Jet stream iyo kuleylka adduunka
Waxaa si joogto ah loogu sheegaa warbaahinta in kululaynta caalamiga iyo isbedelka cimilada ay kordhinayaan soo noqnoqoshada iyo xoojinta abaaraha iyo daadadka. Si kastaba ha noqotee, maxaa loo sheegi waayey. Waxay la xiriirtaa isbeddelada ay ku soo saarto qulqulka diyaaradda.
15-kii sano ee la soo dhaafay oo keliya, abaarihii ba'naa ee ka dhacay Kalifoorniya, hirarka kuleylka ee Mareykanka iyo Galbeedka Yurub, daadadkii halista ahaa ee ka dhacay Pakistan, ayaa uga sii daray markii isbeddelka cimilada ee ay dadku sameeyeen ay carqaladeeyeen hawadan hawada badan.
Waa in lagu xisaabtamo in haddii aan wax ka beddelno qaababkan iyo qaababkan dhaqdhaqaaqa ee hawadda diirran iyo qabow aan noqon doonno kiciya hirar badan oo kuleyl ah, abaaro, iyo qoyaan dheeri ah oo hawada kujira taasoo horseedaysa daadad hor leh. Isbeddelada yar yar ee xilliyadan socda waxay ku abuuri karaan saameyn cimilada adduunka, sida gaabiska ku yimaada cufnaanta hawada. Laakiin maxaa sababi kara qabowga iyo cufnaanta hawo ee ku wareegaya qulqulka diyaaradda inay gaabiso? Waa hagaag asal ahaan farqi yar oo heerkulka ah inta u dhexeysa hawada kuleylka iyo hawada cirifka. Farqigaas yar ayaa u dhacaya kuleylka adduunka awgiis, maxaa yeelay dhammaan hawada meeraha ayaa kululaanaya.
Daraasado dhowr ah ka dib, waxaa la soo gabagabeeyay in bani'aadamku, kacaankii warshadaha ka dib, uu sababay dhimista 70% xawaaraha qulqulka diyaaradda. Tani waxay horseedi kartaa kororka dhacdooyinka ba'an sida abaaraha iyo daadadka.
Sidaad u aragto, cimilada meeraha waxay la jaanqaadeysaa cimiladaan waana farsamooyin ay tahay inay ahaato mid xasilloon haddii aan dooneyno dhacdooyinka saadaasha hawada inay ku sii socdaan inay si sax ah u dhacaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Jet qulqulka
Salaamu calaykum maqaalka oo dhami aad buu u wanagsan yahay ,marka laga reebo kheerka u dambeeya,waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado marka maqaalkan la qoray mahadsanid.
U jawaab Laura Fernandez
Faa'iidooyinka dabiiciga ee duufaannadu keensadaan